VaMugabe Voderedza Masimba aVaTsvangirai muHurumende?
Kukadzi 03, 2010
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende yemushandira pamwe zvichitevera mashoko anoti munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota (cabinet), VaMisheck Sibanda, vakanyorera makurukota ose tsamba vachivazivisa kuti pavanenge vachiita basa ravo, havafanirwe kuenda nekune mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai.
VaSibanda vakaudza makurukota aya asi kuti vanofanirwa kuenda nekune vatevedzeri vaviri vemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru naVaJohn Nkomo, vanowe nhengo dzeZanu PF.
Bepanhau repa internet, reRadio VOP, rinoti izvi zvakabva kuna VaMugabe mbune. Vane ruzivo nezviri kuitika vabvuma kuti pane tsamba yakadai yakabva kuna VaSibanda. Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaSibanda chakapa kuti vanyorere makurukota ose ari muhurumende.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaJames Maridadi, vaudza Studio7 kuti havasati vanzwa nezvetsamba iyi, asi vati kana chiri chokwadi, VaMugabe vanenge vatyora chibvumirano cheGPA.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanotiwo nyaya iyi ingangomutsa muchokoto muhurumende yemubatanidzwa, sezvo danho iri, richityora chibvumirano cheGPA.